Hatsarao ny fisainanao data miaraka amin'ny signage nomerika - EMD
No comments sur How Easy Multi Display afaka manampy anao hanatsara ny fahitana ny angon-drakitrao?Posted in Digital Signage, Signage Enterprise Par Patnamoaka Jona 11, 2021 Jona 18, 2021
Voalohany indrindra, inona ny dashboard?
Ahoana no fomba hamoronana dashboard?
Ahoana ny fananganana ny dabilio mba hanatsara ny fahitana ny data?
Fantatsika fa ny fampitana ny vaovao dia laharam-pahamehana tanteraka ho an'ireo orinasa maniry ny hampiakatra ny tombom-barotra faran'izay haingana sy amin'ny fotoana maharitra. Na izany aza, zava-dehibe ny fananana tontolo iray sary an-tsaina mba hamakafaka azy tsara. Ka amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny fiandohan'ny valiny momba ny fitambaran'ny dashboard ary Hafanàm-po an signage
Ny dashboard dia fitaovana fitantanana ho an'ny orinasa iray izay ny tanjona dia ny haminavina ny fivoaran'ny tsena ivoahan'ny orinasa ka hahafahan'ny mpitantana ny orinasa mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny tsena.
Amin'ny teny mivaingana, ny dashboard dia fitaovana fifandraisana anatiny izay ahafahana mamantatra ireo olana mety hitranga izay mety hatrehin'ilay orinasa atsy ho atsy. Misy karazan-tsipika samihafa ahafahan'ny orinasa miandrandra fiovana:
- Kitapo fandidiana: ilaina amin'ny fanaraha-maso ny drafitra asa fohy;
- Drafitra amin'ny tetibola: izay mampitaha ny vinavinan'ny orinasa amin'ny teti-bola, noho izany dia tabilao natao ho an'ny teny antonony;
- Drafitra stratejika: fitaovana iray mifantoka amin'ny paikadin'ny orinasa ary noho izany amin'ny fotoana maharitra.
Araka ny hitanao dia zava-dehibe ny fanaovana sary an-tsaina momba ny angona mba hijanonana amin'ny fifaninanana. Mba hamoronana dashboard anao manokana hananana tsaratsara kokoa sary an-tsaina, zava-dehibe ny fanarahana dingana fototra sasany hahazoana ny hafatra mety amin'ny olona marina. Andao hojerentsika ny dingana dimy hamoronana ny dashboard anao:
Eritrereto ireo lafiny fandrosoana: voalohany indrindra dia zava-dehibe ny fametrahana ny orinasanao amin'ny ho avy ary noho izany hametrahana tanjona;
2. Farito mazava ny tompon'andraikitra: mila mamaritra mazava tsara ianao amin'izay ho tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ny angona;
3. Farito ny tanjon'ny zava-bita: mandritra ity dingana ity dia tsy maintsy mamolavola ny paikadiny ny orinasa;
4. Safidio ny tondro fampisehoana: inona ny angona ilaina?
5. Fanazavana ny solaitrabe: amin'ny endrika iza no tokony haseho ny sary sy ny statistika?
Saingy tsy ampy izany, mila fitaovana ianao hanehoana ny dashboard anao mba hanatsarana ny sary an-tsaina an'ny orinasanao!
Mila solosaina ianao, efijery iray na maromaro ary farany rindrambaiko famantarana nomerika mahery, azo atokisana ary haingana. Miankina amin'ny isan'ny efijery anananao ny solosaina na kasainao hampiasaina handefasana ny dashboard anao. Eny tokoa, afaka manana efijery marobe ianao nefa mila loharano fanampiny ary solosaina tsara kokoa noho izany. Zava-dehibe noho izany ny mieritreritra ny zavatra ilainao alohan'ny hamoronana ny dashboard anao. Raha efijery iray ihany no tianao hampiasa dia afaka manao fika ny mini-pc. Raha te hampiasa efijery 4 ka hatramin'ny 6 ianao, dia mila solosaina matanjaka kokoa miaraka amin'ny plug-n'ny HDMI marobe toa ny fahitalavitra anananao. Na izany aza, raha tsy te hampiasa vola amin'ny fahitalavitra be loatra ianao, dia mbola misy ny vahaolana mora vidy indrindra. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fitaovana ianao dia aza misalasala Mifandraisa aminay, faly izahay manampy anao! Raha te hividy fitaovana mahitsy ianao dia mila mitady tranokala toy izany primeabgb.com.
Na te-hampiasa efijery 6 ianao na 1 fotsiny, Easy Multi Display dia hanao fikafika ary hamela ny orinasanao hanana sary an-tsary voavolavola! Fa maninona ny Easy Multi Display no "tsy maintsy ananana" ho an'ny orinasanao? Tsotra satria manohana hatramin'ny efijery 6 sy loharano 24 (loharano 4 isaky ny efijery). Midika izany fa na dia efijery iray monja aza no azonao atao dia azonao atao ny mampiseho loharanom-baovao 4 hafa toy ny sary, takelaka Excel, horonan-tsary, rindrambaiko ary maro hafa!
Ankoatr'izay, Easy Multi Display dia manana fiasa maro izay tena ilaina amin'ny orinasa te hampiasa dashboard. Manolotra anao lozisialy iray ahafahanao manomana ny seho alohanao mialoha, hanome anao zon'ny mpampiasa anao, hampiasa fanaraha-maso lavitra mba hitantanana lavitra ny dashboard anao sy maro hafa! Ary farany, Easy Multi Display no rindrambaiko fanaovana sonia nomerika feno indrindra nefa koa mora indrindra eny an-tsena. Aza misalasala intsony ary sintomy ny kinova fitsapana anay!